Umndeni uveze usizi lukaRobbie elwa nomdlavuza | News24
eGoli - Umfowabo kaRobbie Malinga ngoLwesithathu uqinisekise ukuthi lesi sikhondlakhondla somdidiyeli wengoma besinefo somdlavuza i-pancreatic cancer futhi usesigabeni sesine.
Kuthiwa kwatholakala ngoJuni wangonyaka odlule ukuthi unalo mdlavuza nokunguwona obumfaka umkhipha esibhedlela esikhathini esiningi.
Ekhuluma kwisithangami sabezindaba eduze komuzi kaRobbie, umfowabo uBheki Malinga uthe umfowabo ubesehluleka ukuhamba kanye nokudla ngezinsuku zakhe zokugcina, futhi ubesekhulumela phansi. Kukho konke lokhu, wayenika umndeni wakhe ithemba lokuthi kuzolunga.
OLUNYE UDABA:LALELA: Namuhla sikhumbula iBhova likaDikadika
Kuthiwa umndeni kanye nabangani abebesondelene naye kuphela abebazi ngalokhu kugula kwakhe, kodwa umkakhe u-Anne uyena obanike igunya lokuba bakuveze lokhu ukuze kwaziwe ukuthi alikho ihlazo ngokuba nomdlavuza.
Lo mndeni uthi yize ubuwazi ukuthi ukufa kuyeza ngemuva kokuthola ukuthi unoMdlavuza, kodwa kubathusile ukushona kwakhe ngoKhisimuzi.
"Sisashaqekile, kodwa kumele siqine, senzele umkakhe kanye nezingane zakhe,"kusho udadewabo kamakoti.
Lo mculi wayememe abangani abebesondelene naye kanye nomndeni ngokhisimuzi. Wacela umuba umfowabo amphendule amfulathele abantu ngoba bafika sekuhambe isikhathi nokuyilapho aphefumula khona okokugcina.
Kwenzeka lokhu-nje wayesanda kuthatha iholidi eMaldives ngoNovemba, kwamqinisa kakhulu ukugula sebebuyile.